एक्लै उभिएका डा मल्लिकले पाए जोखिम भत्ता – Health Post Nepal
२०७८ वैशाख ९ गते १९:०८
कसले भन्छ एक्लैको आँटमा परिवर्तन सम्भव छैन भनेर।
उदाहरण हुन् उही एक्ला डाक्टर अजित मल्लिक।
२८ दिनसम्म सडकमा उभिएर उनले आफ्नो हकका लागि चिच्याइरहे।
अन्त्यमा उनको मिहिनेतको फल प्राप्त गरे।
कोरोनाकालमा खटिएवापत् सरकार दिने भनेको जोखिमभत्ता दिलाउन माग गर्दै २८ दिनदेखि उनी एक्लै आन्दोलरत थिए।
२७ औं दिनमा उनको मोबाइलमा घण्टी बज्यो।
अनि थाहा पाए मागअनुसारको जोखिम भत्ता प्राप्त भयो भनेर।
सरकारले चिकित्सकहरुलाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरे पनि उनले पाएका थिएनन्।
त्यसैको माग गर्दै डा. मल्लिक लगातार माइतीघरमा उभिरहे।
उनीमात्र होइन उनका सहकर्मी तथा अन्य चिकित्सक, नर्स, तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीहरुले पनि पाएका थिएनन्।
एक्लै आन्दोलन गरेको भनेर कतिले उनलाई हाँसोमा उडाए पनि।
तर उनले हिम्मत हारेनन्।
उनकै आन्दोलनको उपलब्धिको रुपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका सबै फ्रन्टलाइनर चिकित्सकहरुले जोखिम भत्ता पाएका छन्। ‘मलाई एकदमै खुसी लागेको छ।
आखिर मेरो संघर्षले गर्दा मैले मात्र नभई मेरा सहकर्मी तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुले पनि जोखिम भत्ता पाएका छन्,’ उनले भने। उनलाई एक्लै सडकमा उभिन गएको भन्दै कतिले पागल, मूर्ख भने त कतिले सेलिब्रेटि, अनि डाक्टर गोबिन्द पार्ट–२।
तर त्यस्ता कुराले उनको संघर्षमा केही फरक परेन।
‘म यहाँ आन्दोलनका लागि आएको होइन, आफ्नो अधिकारका लागि उभिएको हो। म कुनै सेलिब्रटि या गोविन्द केसी बन्न आएको होइन। न मेरो संगठन छ, न त मलाई समर्थन गर्ने नै छन्। म एक्लै छु यो सडकमा,’ उनले भने।
डा मल्लिकले आन्दोलनको शैलीलाई नै परिवर्तन गरेका छन्। संगठन वा हूलको आवाज मात्र सरकारको कानमा पर्छ भन्ने आममानिसको विश्वासलाई उनको संघर्षले बदलिदिएको छ।
उनी भन्छन्, ‘मानिसहरु नेपालमा जे पनि जायज छ भन्ने सोच्छन्। तर यो गलत हो, नेपालमा केही पनि जायज छैन, यो मेरो देश हो र यहाँ सचेत नागरिकको जरुरत छ। मैले जस्तै सबै जनाले आफ्नो हकका लागि बोल्न सिक्ने हो भने यहाँ कुनै अन्याय हुँदैन।’
एक समय थियो, एक्लै संघर्षमा उत्रिएको भनेर उनलाई सबैले आलोचना गरेका थिए।
त्यतिखेर उनले ज्यादै खिन्न अनुभव गरेका थिए। ‘मेरै सहकर्मी तथा यो पेशामा काम गर्नेहरुले नै मेरो आलोचना गर्दा कतै आफू दोषी पो हो कि, गलत काम गरेँकि भन्ने महसुस भएको थियो। तर मेरो अन्तरआत्माले साथ दियो र हरेक दिन यो सडकमा उभिने सहस आयो। जब उनलाई आलोचना गर्नेले नै ‘प्राउड आफ यू, गुड जब, थम्स अप, स्यालुट’ भने तब उनको मनोबल झन् आकासिएको महसुस उनले गरे।
सबैले फोन गरेर तिम्रो कारणले हामीले पनि जोखिम भत्ता पायौं भन्दै धन्यबाद दिए। अनि, २८ औं दिनमा पुनः उनी माइतीघर मण्डलामा आएर भने, ‘धन्यवाद सरकार’ ।।
डा. अजित मल्लिक